Qaybta 1aad: Sida loo dhoofiyo Video MP4 ka Old Version of Adobe jilitaankii Taasi ma taageeri MP4
Qeybta 2: Sida loo dhoofiyo Video MP4 ka Adobe jilitaankii Pro Directl ah
Qaybta 1aad: Sida loo dhoofiyo Video MP4 ka Old Version of Adobe jilitaankii Taasi ma taageeri MP4?
Waxa uu ahaa ayaa hore u sheegtay in Adobe Ciyaar ma la shaqeeya iyo taageero files MP4. Si kastaba ha ahaatee, files MP4 u dejinta iyo codec ku kala duwan yihiin laga yaabo in ka files MP4 kale oo aan aad u badbaadiseen ama laga dhoofiyey qalab kala duwan, ciyaaryahan ama barnaamijka. Sidaa darteed, waxaad weli laga yaabo in ay keeneen in fariin qalad ah akhriska 'qaab ama dhaawac file aqlka'. Haddii aad u isticmaaleysaa hadda version hore oo jilitaankii Adobe ah, dadka intooda badan aad ku talin lahaa in ay u cusboonaynta in nooca ugu dambeeya si ay u aqoonsan lahaayeen file MP4 ah. Waxaa laga yaabaa in ay daruuri ma shaqeeyaan kiisaska oo dhan sida aad la kulanto laga yaabo kala carar video (ie sida xawaaraha loo maqli gaabis ah ama shil screen).
Hababka kale dayey oo la tijaabiyey by users ee Adobe jilitaankii si loo hubiyo in shaqada files MP4 waa in ay si toos ah magaca files MP4 sida an Mpg, MOV, M4V ama iyaga loogu badalo in ay soo gudbiyaan nooc ama qaabab in la jaanqaadaan. Hore ma aha fursada ugu wanaagsan sida tayada videos ma wanaagsana in ku filan oo ay u isticmaalaan internetka. Sidaa awgeed, waxaa fiicnaan laheyd hadii aad u bedeli karaan faylasha MP4 la kasta video Converter in aad leedahay anfacaya aad kombuutarka. Haddii aan, waxaad isku dayi kartaa malaha soo Wondershare Video Converter Ultimate . Video Converter Ultimate Ayaa dhab ahaan kaa caawin kara inaad si loogu badalo files MP4 si aad u qaab in uu aqbalo iyo ay taageerayaan Adobe Ciyaar aad u habaynta qoraalka ujeedada.
1. Upload iyo badalo
Just guji-xidhiidhinta ee kor ku xusan, halkaas oo aad kala bixi karto in ay isku dayaan wax soo saarka ama si wax ku iibsatid. Akhri fudud ee ku saabsan naga tallaabo-tallaabo hage u horeeyo. Ha ku dhumin waqti aad iyo kaliya muujiyo oo dhan files MP4 in aad u baahan tahay in la saxaa Adobe jilitaankii gal barnaamijka marka la rakibo. Haddii aad doonayso inaad tijaabiso hawlaha tafatirka dhisay-in, inaad sameyso oo dhan waa riix Edit button dhinaca midig ee shaqsi kasta clips video ah. Haddii kale, waxay qaadi karaan talaabada 2.
2. Dooro qaab wax soo saarka aad
Marka dhammaan faylasha MP4 aad ayaa loo uploaded gal Video Converter Ultimate ah, waxaad dooran kartaa qaab saarka doorbidayso aad ku saleysan nooca qalab, qaab ama nooc file caan ah oo aad. Ka dib markii in, guji-ku C onvert badhanka si ay u bilaabaan hawlaha qaab beddelidda. Fariin pop-up A muuqan doono shaashadda mar diinta ayaa dhameystirtay.
3. muuqaalada Optional
Waxaa jira in ka badan in ay diinta iyo sixiddiisa video files leh Converter Video ah Ultimate yihiin. Hubi qaababka optional aad u xiiso sida gubasho aad video files gal DVD ah iyo shakhsiyeeyo menu DVD ama badbaadin softcopy ah sida image file ISO ah. Baro waxa kale ee aad samayn kartaa adiga oo videos hadda!
Qeybta 2: Sida loo dhoofiyo Video MP4 ka Adobe jilitaankii Pro toos ah
Ma aha news dheer in Adobe jilitaankii Pro ha kartaa inaad abuurto videos MP4 in dhoofin karo qalab kale. Inkasta oo ay jiraan dhibaatooyin badan oo soo bixi kara inta ay socoto dhoofinta, qaar badan oo ka mid ah arrimahan soo celin ogan karo qaar ka mid ah dhoofinta si khaldan u qotomiyey. Si looga fogaado qaar ka mid ah arrimaha ka soo shaac ka dhoofinta ah dadejiyaan, waxaa muhiim ah in la hubiyo in wax soo saarka goobaha aadin goobaha aad isku xigxiga iyo labo gool waxa ay u hubiso in ay tahay run. Dhoofinta video MP4 ah ma aha marka laga reebo ah, weli waxay raacdaa hannaanka xulashada file, dhoofinta iyo warbaahinta. Tallaabooyinka hoose na tusi doonaa sida loo dhoofin Video MP4 ka Adobe ah weerarkii Pro.
1. Dooro xigaan
Waxaad u leeyihiin in ay doortaan xigxiga aad rabto inaad ka dhoofin in guddi waqtiga
2. dhoofinta Settings Media u doorataa file - Dhoofinta - Media ka bar menu
3. Dhoofinta Goobta - Qaabka
Dooro H.264 dhinaca midig ee suuqa dhoofinta dejinta ee. Ogsoonow in H.264 abuuri doonaa file video MP4 taas oo playable on ugu casriga ah, iyo kombiyuutarada
4. dhoofinta Settings - horena
Haddii aan dhoofinta our MP4 video in dhufto ee internetka sida vimeo iyo YouTube, ka dibna u guuraan aad mouse si hoose ee liiska Rafaa ee doorasho iyo guji menu madow ka yeellay ka dropdown ee horena. Markaas sii hoos liiska in fursadaha YouTube.
Dooro wax soo saarka wanaagsan ee ku salaysan aad isku xigxiga.
5. dhoofinta Settings - Magaca Output
Riix magaca soo saarka si loo badbaadiyo file ah oo u qotomiyey ku wadid aad u adag. Waxaa muhiim ah in la ogaado in Adobe jilitaankii Pro had iyo jeer lagu mutaysanayo gudasho la'aanta meesha la soo dhaafay in dhoofinta sida badbaadiyey. Waxaad heli doontaa inaan laba jibaarno hubinta badbaadin goobta adigoo gujinaya magaca wax soo saarka si aanay u raadiso file dambe.
6. dhoofinta Goobta - Dhoofinta ama safka
Dhoofinta Video MP4 ah waa in la sameeyaa marka aad samaynayso oo dhan shaqo iyo ma damacsanaa inay fuliyaan hawlo badan oo ku saabsan kombuyuutarka. Tani waa sababta oo hawl dhoofiyo waxay u baahan tahay badan oo dhan ee xasuusta iyo sida barnaamijyada oo dhan la xiray inta hawsha la socda.
Haddii aad doorato dhoofinta, riix badhanka dhoofinta ugu hooseysa iyo bilowdo dhoofinta faylka.
Doorashada button safka micnaheedu waa inaad dooneyso in ay sii wadaan qorshe ah dhoofinta faylka wakhti danbe ka shaqeeyo. Riix safka in file video dhoofinta barnaamijka Encoder warbaahinta Adobe kaas oo u ogolaanaya dhoofinta videos ku yaalla wakhti dambe soo diri
7. Hubi in aad u ciyaaro ka hor inta aadan geliyaan
Kaliya ma geliyaan si ay u YouTube isla markiiba. Waxaa lagu talinayaa in u ka ciyaaro on your computer si loo hubiyo in waxa aad rabto in aad geliyaan waa ugu tayada sareeya oo aad ka filan in ay soo bandhigaan u dhagaystayaasha daawashada aad.
Fiiro gaar ah: Haddii aad la xanibay computer ama u yarayso markii dhoofinta, aad u baahan tahay si ay u dami oo dhan marka laga reebo barnaamijyada Adobe jilitaankii Pro.
> Resource > MP4 > Sidee ayaan Edit Karaa MP4 la Adobe jilitaankii by Siyaabo kala duwan